Aina ity, hoy Rainimanonja • AoRaha
Aina ity, hoy Rainimanonja
Salama tompoko. Mandady ny trambo. Tandindonin’ny fahafatesana mikararana ny ankamaroan’ny Malagasy, izay manao be di-doha tsy hanaraka ireo fepetra sy sakana ara-pahasalamana, ao anatin’ny fihanaky ny valanaretina Covid-19, amin’izao fotoana izao. Na mitombo isan’andro aza ny isan’ireo efa namoy ny ainy, na miakatra isan’ora ihany koa aza ny tahan’ireo olona voatily fa mitondra ny tsimok’aretina, dia tsy misy taitra ny rehetra.
Ny fanjakana variana amin’ny mahavariana azy, ny vahoaka variana amin’ny adim-piainana. Dia samy hiandry hobaikoina sy hamelomana lakolosy ve vao handray andraikitra? Ny olana, dia toa mandrimandry manana aretina na ny mpitondra na ny entina. Ny an-daniny, miantehitra amin’ireo fanafody vokarin’ny orinasa malagasy. Ny an-kilany mahatoky ny evoka sy ny ady gasy. Sanatria rehefa tena midangana ny tahan’ny fahafatesana vao hifanome tsiny.
Na izany aza, aleo asian-dresaka ny momba ireo fanafody hitan’ny mpikaroka malagasy. Toa hoe voarara hono ny fampiasana ny “Ed1”, nefa dia maro no efa nijoro vavolombelona fa nahita fahombiazana tamin’ny fampiasana. Raha mahasitrana tokoa lehiretsy inona no olana a? Angaha moa tsy ny fahombiazany no tena zavadehibe? Angamba, tsy mbola nisy porofo fa namoy ny ainy tamin’ny fampiasana an’io fanafody io. Izay taratasy sy ny forongony, afaka miandry izany. Ny ain’ny Malagasy aloha no tokony ho laharam-pahamehana. Ampiasao izay azo ampiasaina, avoahy daholo izay azo havoaka fa aina ity, hoy Rainimanonja.
Rehefa resy kosa anefa ny valanaretina, dia tokony hiditra amin’ny ara-dalàna ny mpikaroka. Ny fanjakana no voalohany tokony hanohana sy hanampy an’ireo mpikaroka mba hahafahan’izy ireo mamokatra izay mahasoa. Isika Malagasy kosa aoka mba ho sarotiny alohan’ny tompony, ka sahy hijoro hiaro ny tombontsoa ho an’ny daholobe, ka hiady amin’ny hosoka sy ny fisolokiana samihafa. Tsy hilaozan’izay ho mpanararaotra sy tia kely mantsy rehefa samy may endim-boanjo hanavotra aina koa samia mailo.
Aza hatao zara vilana!